Vokatry ny rivodoza Eloise: voa mafy Antalaha, 1.026 ireo traboina | NewsMada
Maiva-mavesatra ilay rivodoza Eloise. Na tsy natanjaka aza ny rivotra nentiny, nampitondra takaitra kosa ny orambe nanaraka azy. 1.026 ireo traboina hatry ny omaly voarain’ny BNGRC. Mitohy ny fanangonana ny tatitra avy amin’ny distrika maro.
Nampitondra takaitra tany amin’ny faritra Sava ilay rivodoza Eloise. Raha ny tatitry ny BNGRC, omaly, maromaro ny trano rava, olona traboina sy toeram-pambolena dibo-drano. Nahazoana tatitra ny distrikan’i Maroantsetra, Vavatenina, Toamasina I, Antalaha, Mandritsara ary Befandriana Avaratra.
Nahatratra 1.026 ireo olona traboina ary anisan’ny voa mafy ny ao Antalaha, kaominina Ambohitralanana sy Ampanavona, satria miisa 391 ireo tsy manan-kialofana. 610 kosa ireo olona tsy maintsy nafindra toerana tamin’ireo distrika voakasika satria dibo-drano tanteraka ny faritra nisy azy ireo. Maromaro ireo fotodrafitrasa simba. Anisan’ny lasibatra ny efitranon-tsekoly satria 31 ireo nahitana fahasimbana. Sekoly efatra kosa no potika tanteraka noho ny rivotra. Vita amin’ny akora eny ifotony ny ankamaroan’izany sekoly izany.
Ankoatra ireo, trano fonenana 134 ihany koa no dibo-drano ary 56 rava tanteraka tsy azo honenana intsony. Nisy ihany koa ireo andrin-jiron’ny Jirama mitondra herinaratra matanjaka nianjera, izay atahorana hitera-doza amin’ny mponina. Teo koa ny hazobe nidaraboka sy ny takelaby misy dokam-barotra zakan’ny rivotra sy nianjera.
Nilaza ny BNGRC fa ampy ho an’ireo traboina ny tahiry misy toy ny vary, menaka, savony, labozia, siramamy sy ireo kojakoja ilaina andavanandro. Hisy ny sidina manokana hatao amin’ny fiaramanidina hijerena akaiky ireo toerana mila famonjena sy alavitra hahafahana manao tombana sy mitsinjara ny fanampiana maika tokony hatao ny mponina any amin’ireo toerana tena voa mafy.
Mbola mitohy ny tatitra tonga any amin’ireo distrika sasany arakaraky ny fahavoazana misy nateraky ny rivodoza Eloise. Omaly, mbola nanatanjaka ny heriny tao amin’ny faritra Boeny izy nialohan’ny nivoahany any an-dranomasina tanteraka.